Idizayini Ephendulayo, Ukuyithola Ngokufanele | Martech Zone
Idizayini Ephendulayo, Ukuyithola Ilungile
NgoMgqibelo, Agasti 10, 2013 NgoLwesihlanu, Agasti 9, 2013 Douglas Karr
Ngokusho kwe-Wikipedia, umklamo ophendulayo kuyindlela yokuklama iwebhu ehlose ukwakha amasayithi ukunikela ngesipiliyoni sokubuka esilungile — ukufunda okulula nokuzulazula okunobukhulu obuncane bokushintsha usayizi, ukukhulisa, nokuskrola — kumadivayisi ahlukahlukene (kusuka kubaqaphi bekhompuyutha bekhompuyutha kuya kumaselula). Umklamo ophendulayo iya ngokuya ithandwa kakhulu ngoba ayidingi ukuthi umklami akhiqize izixhumi eziningi zesiza seselula, ithebhulethi nedeskithophu. Idizayini ephendulayo isebenzisa izindlela zakamuva ze-HTML ne-CSS ukulungisa ngokuzenzakalela ukwakheka endaweni yokubuka.
Imayelana nokugcina izici ezivakashelwa izivakashi, futhi akukho lutho lwezinto abangazenzi. Ayikho indawo yemidwebo eminyene, ukuzulazula okudidayo, noma amakhasi avalwe kuzinqumo zedeskithophu kuphela. Abasebenzisi beselula bafuna i-Intanethi yabo incike, ihlanzeke, futhi ibe nesayizi esikrinini sabo.
Idizayini ephendulayo idinga umklami wewebhu onolwazi ngolwazi lobuchwepheshe nokuhlela kusengaphambili kokusebenzisa kahle ukubukwa nokuzulazula kwesiza. Kuyaziswa futhi izinjini futhi isiqala ukubeka ibanga impela phakathi kokuklanywa kwamasayithi amadala esikole nemiklamo yakamuva nemikhulu kunayo yonke. WhoIsHostingThis ihlanganise le infographic efundisayo ekwakhiweni okuphendulayo kanye nohlu lokuhlola ukuze kwenziwe ngempumelelo.
Tags: ukwakhiwa kweselulaukwakhiwa kwewebhu yeselulaisabeleumklamo ophendulayoukwakheka kwethebhulethiithebhulethi web design
I-Curata: I-Curate Okuqukethwe Okufanelekile Kwebhizinisi Lakho.